Fandikan-dalàna nataon’ny Sambo « Louise II” : Raikitra ny sakoroka… -
AccueilRaharaham-pirenenaFandikan-dalàna nataon’ny Sambo « Louise II” : Raikitra ny sakoroka…
04/09/2017 admintriatra Raharaham-pirenena 0
Voatery nalain’ny miaramilan-dRanomasina Malagasy teny an-tanan’ilay olona naka sary ny sambo “Akio” ny fakan-tsariny, mba hamafana ny sary nalainy. Na dia efa norarana tsy haka sary aza mantsy io olona io, dia mbola nanao fanahy iniana an’izany ihany. Raikitra ny sakoroka, ka ny niafarany dia voafafa ihany ny sary voarara.
Ny sambo “Akio”, dia fitaovam-piadian’ny tafika Malagasy, izay manao ny asa fisafoana eny an-dranomasina ka tsy azo alaina sary raha tsy mahazo alalana. Tamin’ny fanaovana fisafoana nataony ny alakamisy teo ( 31 aogositra 2017) tokony ho tamin’ny 9 ora maraina, teo amin’ny Helodranon’i Hell-Ville dia nahatsikaritra sambo mpitatitra olona nanao fandikan-dalàna ireto tafika an-dranomasina Malagasy ireto.
Fantatra tamin’izany fa “Louise II” no anaran’ity sambo ity ka taorian’ny fisafoana natao dia tsapa fa nihoatra efatra ny isan’ireo mpandeha. Nandritra ity fotoana nanatanterahan’ireto mpitandro filaminana an-dranomasina ny asany ireto anefa no nitranga ilay sakoroka.
Ankoatra ny fanenjehana ny mpanao trafika an-dranomasina maro sy ny mpanao trafikana andramena dia asan’ity sambo haingam-pandeha an’ny tafika Malagasy ity koa ny manao fanaraha-maso ny sambo mpitatitra olona. Vao tsy ela no niteraka loza namoizana ain’olona maro tamin’ny zotra an-dranomasina Ankify -Nosy Be , ka ny fisorohana an’izay indrindra no anton’izao hetsika izao.
Ankoatra ny asa fampandrosoana ara-toekarena tanterahin’ny Filoha Hery Rajaonarimampianina, dia tsy nohadinoiny ihany koa ny mahakasika ny tanora sy ny fanatanjahantena. Rariny raha ampiana ny tanora satria izy ireny no tompon’ny ankehitriny, hoy ny Filoha. ...Tohiny